Orod Yahan Mo Farah Oo Doonaya Inuu Xil Ka Qabto Kooxda Arsenal Marka Uu Orodka Ka Fadhiisto
HomeWararka MaantaOrod Yahan Mo Farah Oo Doonaya Inuu Xil Ka Qabto Kooxda Arsenal Marka Uu Orodka Ka Fadhiisto
27/09/2016 Samatar Mohamed
Orod yahanka caanka ah ee u dhashay dalka Somaliland Maxamed Faarax balse haysta dhalashadda dalka Ingiriiska, isla markaana u orda dalkaasi ayaa laga war hayaa inuu taageere weyn u yahay kooxda Arsenal tan iyo yaraantiisa, wuxuuna sheegay inuu jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo marka uu ka fadhiisto orodka.
Mo Farah ayaa doonaya inuu noqdo tababaraha jidh dhiska Gunners marka uu ka fadhiisto hawsha uu imika hayo ee orodka. Orodka 5000 iyo 10000-mitir ayuu dhawaan ku guuleystay Maxamed Faarax ciyaarihii Olombikadda ee dhawaan lagu gunnaanaday dalka Brazil.
“Hal wax oo aan dhabtii jeclahay waa kubadda cagta, waxaana xidhiidh wanaagsan la leeyahay kooxda Arsenal” 33-sanno jirkan ayaa sidaa u sheegay Sunday Times. “Waxaan bilaabay inaan taageero iyaga markii ugu horreysay aan imid Britain annigoo caruur ah. Waan ka helaa sida ay u ciyaarto, sidoo kale waxay leedahay ciyaartoy baddan oo ka timid Afrika”.
Orod yahankan ayaa hadalkiisi ku soo af-meeray “Maalin maalmaha ka mid ah waxaan jeclaan lahaa inaan la shaqeeyo Arsenal, laga yaabee sida tababaraha jidh dhiska, aad ayaan u aaminsanahay waxa uu jidhka awoodi karo marka uu tababar sax ah helo”.